कृषि क्षेत्रका सबै अनुदान सहकारीमार्फत दिने तयारी
सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि दिने विभिन्न अनुदान कृषि सहकारीमार्फत वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । व्यक्तिलाई दिएको अनुदान दुरूपयोग भएको भन्दै यसलाई सहकारीमार्फत परिचालन गर्ने योजना रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
“सहकारले कृषिमा दिने अनुदानमा पुनरावलोन गर्न लागिरहेको छ,” राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गरेको सहकारी उद्यम प्रवद्र्धन गोष्ठीमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “व्यक्तिले लगेको अनुदान दुरूपयोग भएकाले सहकारीमार्फत वितरण गर्नेबारेमा हामी छलफल गर्दैछौं ।” सहकारीमार्फत कृषिका लागि गएको अनुदान उद्देश्य हासिल हुने उनले भनाइ थियो ।
सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै उनले सहकारी उद्यम सदस्य र समुदायप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । “सरकारले सहकारीमा योगदान गर्न खोजेको छ, तर सहकारी र निजी व्यवसाय उस्तै उस्तै देखियो भने सरकारले पनि उस्तै–उस्तै व्यवहार गर्दछ । फरक देखिए सरकारले सहुलित दिन्छ” उनले भने । अर्थमन्त्री खतिवडाले रासायनिक मल, यन्त्र उपकरण, शीतभण्डार वा अन्य प्रशोधनका लागि दिइने अनुदान सहकारीको माध्यमबाट जानुपर्ने र आधुनिकीकरणसहितको कृषि उद्यममा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारले हाल तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, दूध कुनै पनि प्रशोधनमा २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले भने, “मिल्क होलिडे हटाउन अहिले सरकारले दूध पाउडर कारखानाका लागि खुलारूपमा पूँजीगत अनुदान दिन लागेको छ । मासु प्रशोधन र निर्यात गर्ने गरी आउने उद्यमीलाई समेत अनुदानको व्यवस्था सरकारले गर्छ ।” उनले सहकारीलाई अवरोध हुने कानुन संशोधन गरेर जडिबुटी, पर्यटन, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सहकारीको च्यानल प्रयोग गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार डा. हरिकृष्ण उपाध्यायले दिगो र प्रभावकारी सहकारीका लागि सदस्यता संख्या, सदस्यको आर्थिक समुन्नति र सुशासन आवश्यक हुने औंल्याए । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारीलाई व्यवसायतर्फ उन्मुख गराउँदै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, युवालाई आकर्षित गर्ने कार्य गर्नुपर्ने बताए । सहकारी अभियानले भाषण गरेर मात्र समृद्धि नआउने भन्दै उनले पर्यटनलगायत विविध क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यस्तै पूर्वमन्त्री गणेश शाहले उद्यमशीलता विकासमा नविन प्रविधिको प्रयोग र डा. राजु अधिकारीले व्यवसायकी सफलताका लागि सकारात्मक सोचको विकास विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । गोष्ठीमा देशभरका २ सयभन्दा बढी सहकारीकर्मीको सहभागिता छ । शुक्रबार सम्पन्न हुने गोष्ठीबाट काठमाडौं घोषणापत्रसमेत जारी हुने महासंघले जनाएको छ ।